Inyathi - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Isilwanyana esikhulu esinamndla, inyathi yase afrika ifikelela emagxeni ukuyotsho ukuphakama ananye namahlanu iimitha ezinamakhulu asixhenxe anama mahlanu ekhilogram. Zombini ezi sini zinempondo, ezo nkomo zi bonakala ngamaphondo aphindliweyo.
Iinyathi zino kubaluleka kwindalo kwii ntsimi. Njengoba zisitya kakhulu, zi noxanduva loku guqula innca ende ibe mfutshane kwii ndawo ezifanelekileyo kwezinye izilwanyane ezi nokutya okukhethekileyo.
Inyathi ese mahlathini zenza ezesondo phakathi kwe nyanga yekwindla necanzibe. Zithwala imini eziyi Ngamakhulu amathathu namathathu. Amathole athile azalwa phakathi kwenyanga yomqungu kunye ne nyanga yetshazimpuzi, nokuthi xha ngenyanga yomdumba. Inyathi zase Afrika ziyabumbana. Ezi nyathi zyafumaneka ziligquba, kodwa ziyacutheka ngelixa lembalela.
Ixhoba lazo yingonyama. Xa kukhona inyathi ethe yahlaselwa, ezinye ziyakhawuleza ukuyoyilwela loo nyathi. Xazibumbene. Iinyathi ziyakwazi ukuyibaleka intlaselo yeengonyama. Inyathi eyonzakeleyo yeyona inengozi kubazingeli yiyo lonto isaziwa kumhlaba uphela njengeqela le “Big Five” Oku kuzuka kwamabali waba zingeli, iingongoma kunye nee ngcamango.
Zihlala phakathi kwemithi eSavanna, kwaye igquba lee nyathi zase Afrika ziyafumaneka eKruger National Park, zili gquba elincincane kwa Zulu nase
Kuyatshiwo ukuba inyathi ikujonga ngathi uyityala imali, kwaye yeyona ncazelo ifanelekileyo xa unodibana nayo uhamba ngeenyao ehlathini. Inyathi ziphathaintsholongwane ezibulala izilwanyana zasekhaya, ngenxa yesi zathu, inyathi engenantsholongwane ziyadityaniswa zilaiswe kakhulukazi kwii ndawo ezi fana nempuma koloni eMzantsi Afrika kwaye zithengiswa ngexabiso eliphakamileyo.